Maxkamada ciidamada qalabka sida oo dil iyo xarig ku xukuntay rag iyo Dumar lagu eedeeyey Al-Shabaab
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowlada Somalia ayaa maanta xukuno isugu jira dil iyo xarig ku riday illaa 10 qof oo la horkeenay kuwaasoo lagu soo eedeeyey iney ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Dadka la soo taagay maxkamada oo ay ku jirtay haweeney ayaa mid ka mid ah waxaa lagu xukumay dil toogasho ah ka dib markii uu qirtay inuu bishii Ramadaan ee dhamaatay ka qeyb qaatay dilalkii ka dhacayey Muqdisho, uuna gacantiisa ku dilay dhowr qof.
Sidoo kale maxkamada ayaa todoba ka mid ah dadkan ku xukuntay xabsi daa’in oo la macno ah in inta noloshooda ka dhiman ay ku qaadanayaan xabsiga, iyadoo labada kale ee hartay ay maxkamadu ku riday xabsi gaaraya min 10 sano oo xarig ah.
Gudoomiyaha Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dhamaan xukunadan ay maxkamadu riday ka dib markii ay aragtay markhaati buuxa oo la horkeenay iyo qiraalka qaar ka mid ah maxaabiista la xukumay.
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa dardar gelisay mudooyinkan howlaheeda iyadoo xukuno toogasho ah ku fulisay dhowaan rag fara badan oo lagu eedeeyey iney ka tirsanaayeen Al-shabaab isla markaana geysteen dilal kala duwan iyo qaraxyo.